हाम्रो खानामै पृथ्वीको स्वास्थ्य- विचार - कान्तिपुर समाचार
अस्वस्थ र असभ्य खाद्य तथा कृषि प्रणाली हुनुको कारण दलाली गरेर पैसा कमाउने मानसिकता हावी हुनु हो । ज्ञान, विज्ञान र शिक्षा पलायन हुनु हो । आम नागरिकमा जागरुकता जरुरी हुन्छ । तपाईं के गर्नुहुन्छ ? आधुनिक सभ्यताको मानक नै खनिज र रसायनमा आधारित भौतिक विकास मात्र देख्ने विकासे मानसिकताको पछि लाग्नुहुन्छ कि समृद्धिका नाममा पानीजहाज र रेल यात्रामा सयर गर्न निस्कनुहुन्छ ? या, खानेकुरा, जीविका, आम्दानी, रोजगारी र सिंगो मानव सभ्यताको मानक दिगो कृषि बिर्सेको मूल प्रवाहको भीडका पछि लाग्नुहुन्छ, जसले खानेकुरा, मानव र पृथ्वीको स्वास्थ्यका लागि समग्र कृषि रूपान्तरणको मर्म बुझिसक्दा यो सच्याउने समय धेरै नै घर्किसकेको हुनेछ ? या, बिराएको बाटो फेर्न तयार हुँदै, आफ्नै बलबुतामा दिगो पृथ्वी र मानव भविष्य निर्माणको यात्रा तय गर्न निस्कनुहुन्छ ? के गर्ने, यहाँकै मर्जी ! प्रकाशित : असार १२, २०७६ ०७:४७
चौथो, मौसममा फलाउने र बेमौसममा खानका लागि प्रशोधन र भण्डारणका पूर्वाधार बनाई ठूला सहरको तरकारी आपूर्ति गर्ने दीर्घकालीन समाधान खोजिनुपर्छ । अन्त्यमा, तरकारी किसान र फौबन्जार सहरिया मानिसका मात्र चाहिने मित्र हुन्, यिनको श्रमबिना हाम्रो जिन्दगी सम्भव छैन । यो कुरा आफू बुझौं र अरूलाई पनि बुझाऔं ।
प्रकाशित : जेष्ठ १५, २०७६ ०७:५४